Ahoana ny fanovana ny navigateur default amin'ny Android | Androidsis
Ignatius Room | | Tutorials
Na dia Chrome no mpizaha tena be mpampiasa indrindra amin'ny rafitra fiasa rehetra, Tsy midika izany fa io no navigateur tsara indrindra izay hitantsika eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Firefox, Opera, mpizahatany Samsung ... izy ireo dia mpizaha tena tsara izay manome antsika asa bebe kokoa noho ny Chrome.
Ny tombony lehibe amin'ny fifaninanana izay omen'i Chrome antsika amin'ny kinova ho an'ny solosaina dia ny fandidiana tonga lafatra rehefa miditra amin'ny Gmail, Google Drive, Google Maps isika… Zavatra tsy mitranga amin'ny ekôstôlisista finday, satria atolotra amin'ny alàlan'ny fampiharana avy amin'ny antoko fahatelo ireo serivisy ireo.
Ny fahombiazan'ny Chrome, indrindra amin'ny Android, dia vokatry ny zava-misy tonga mialoha napetraka amin'ny finday avo lenta rehetra izay mahatratra ny tsena amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny Play Store ary io koa no mpitety toerana tsy misy fampiasa amin'ny Android.
Soa ihany, ao anatin'ny safidy fikirakirana Android, afaka mampiasa browser hafa izahay amin'ny alàlan'ny default, ka isaky ny tsindrio ny rohy rehetra dia hisokatra ny tranokalanay ankafizinay fa tsy Chome.
Amin'izany fomba izany, ho fanampin'izany, dia hisorohana ny fitaovantsika tsy hanontany antsika hatrany hatrany izay mpitety tadiavintsika sokafy ny rohy izay efa notsikilainay, indrindra rehefa manana navigateur mihoatra ny iray napetraka izahay.
1 Ahoana ny fanovana ny navigateur default amin'ny Android
2 Safidy hafa ahazoana azy, miaraka amin'ny "Open with"
Ireo no ilay Dingana hanovana ny navigateur default amin'ny Android:
Voalohany, ary satria mahazatra ny manao karazana fanovana rehetra amin'ny fikirakirana ny fitaovantsika, dia mankany amin'ny Fikirana ny rafitra.
Manaraka, tsindrio eo fampiharana ary avy eo eo amin'ny kodiarana lamba hita eo amin'ny zorony ambony ankavanan'ny efijery.
Amin'izay fotoana izay dia hiseho loa fampiharana default rehefa mizaha, mampiasa fifandraisana, ny fampiharana kalandrie ...
Raha te hanova ny navigateur default, kitiho ny Fampiharana Browser ary avy amin'ny drop-down izay aseho, dia mifantina ilay iray tadiavinay ho ilay manokatra ny rohy rehetra izay tsindrio izahay.
Safidy hafa ahazoana azy, miaraka amin'ny "Open with"
Raha manana fampiharana Android default mihoatra ny iray ianao dia matetika no manontany anao hoe inona ny hetsika tianao hatao sy ny fampiharana izay. Amin'ity tranga ity, raha manana mpiorina roa napetraka ianao dia afaka misafidy iray amin'izy ireo. Ny zavatra mety dia ny manana ny iray tiany kokoa noho ny iray hafa, fa amin'ity tranga ity dia tsara ny manana pro pro raha tsy mahomby ilay iray hafa.
Raha te hiseho ny "Misokatra miaraka" ianao dia mila mamafa ny safidy "foana". miaraka amin'ity rindranasa ity, noho io dia mila esorinao ny sanda default raha tianao ny hanontaniako anao indray. Betsaka ny nanontany tena tamin'izy ireo ary ny valiny dia ny tsy fisafidianana ny "foana" izay sokafana miaraka amin'n'y app io.
Mba hanaovana izany dia mandeha any amin'ny Settings> Applications> Browser ianao izay manana toerana misy anao ary amin'ny safidin'ny Open by default fidio raha hamafana ny voafafafafafafafafafafa amin'ny alàlan'ny fanindriana ity boaty ity. Ankehitriny isaky ny te-hanokatra URL avy amina rindrambaiko iray ianao dia hanontany anao hoe iza no browser hampiasaina amin'io fotoana io ary tsy hisokatra izy io raha tsy omenao azy hahatadidy "foana".
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Ahoana ny fanovana ny navigateur default amin'ny Android
Maria del Carmen Mejuto Castineira dia hoy izy:
Azafady, tiako ny navigateur miteny Brave
Valiny an'i Maria del Carmen Mejuto Castiñeira
mejutocastineira@hotmail.com azafady mila ny navigateur Brave aho / tsy tiako ny asan'i Google
Tsara Maria, Mahereza, azonao jerena amin'ity rohy ity: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brave.browser&hl=es&gl=US
Ny lalao baolina tsara indrindra ho an'ny Android